The Ab Presents Nepal » ६ दिनपछि नेपालमा लकडाउन खुल्दै , सरकार यस्तो भन्छ ?
६ दिनपछि नेपालमा लकडाउन खुल्दै , सरकार यस्तो भन्छ ?
काठमाडौ -: नेपाल लगायत विश्वभर कोरोना महामारी डरलाग्दो बन्दै गएको छ । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण २३ लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् । ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या १ लाख ६० हजार भन्दा धेरै रहेको छ । नेपालमा पनि ३१ जना संक्रमित भए तर ३ जना निको पनि भैसकेका छन् । अहिले नेपाल लगायत विश्वका धेरै सरकारहरुले लकडाउन गरेका छन् । यस्को प्रभाव कम गर्नका लागि विभिन्न सरकारले आ–आफ्नै तरिकाले लकडाउन गरेका छन् । शीर्षकसँग सम्बन्धित भिडियो यही अपलोड गरेका छौ । क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।